Profil de WDRB FOX 41 ao Louisville
WDRB FOX 41 any Louisville
Ny WDRB FOX 41 any Louisville dia mandefa vaovao amin'ny alatsinainy - zoma: 5 am, 6 am, 7 am, 8 am, 11:30 maraina, midi, 4 hariva, 4:30 alina, 10 alina. Ny asabotsy sy alahady, ny vaovao dia amin'ny 10 ora hariva Mazava ho azy, rehefa misy vaovao na fampandrenesana tokony hizarana, ny WDRB FOX 41 Louisville dia mamela fandaharana mba hanomezana ny mpijery amin'ny vaovao ilaina.
Ny fantsom-pahitalavitra 41 dia nanomboka tamin'ny taona 1950 ary nandalo fiovana vitsivitsy talohan'ny nahatongavan'i Independence TV tao Louisville.
Io no toeram-piantsonana tsy miankina voalohany tao Louisville ary nipetraka teo afovoan-tanànan'i Louisville, any Main Street ny trano. Ny sasany amin'ireo fampisehoana malaza indrindra ao amin'ny TV Fahaleovantena dia ahitana ny " Night Night" ary ny Presto Magic Clown . Fikolokoloana ho an'ny mpihaino maro samihafa, ny Fandriampahalemana alina dia fampisehoana mahaliana momba ny horonantsary horonantsary ambany fandaniam-bola ary nihazakazaka ny asabotsy. Ny Presto Magic Clown dia natao ho an'ny ankizy. Natao isan'andro izy io ary nampiditra sariitatra, mpanakanto ary fitsingerenan'ny andro nahaterahana.
Teo amin'ny taona 1970 tany ho any, nihanitatra ny fananana sy ny fananana. Nivelatra ny ora ary avy eo dia nafindra tao amin'ny vondrom-bahoakan'i Butchertown any Louisville ny tranonkala iray, faritra iray izay mipaka hipoka sy mivezivezy amin'ny toerana toy ny Market Butchertown . Avy eo, tamin'ny 1908, dia nisy fiverenana niverina tany afovoan-tananan'i Louisville, nankany amin'ny toerana nisy azy ireo tao amin'ny Muhammad Ali Boulevard (raha mitsahatra ianao, jereo ny The Seelbach Hotel) .
Rehefa lasa Affiliate Fox ny Station
Teo am-piandohan'ny taompolo 1980, dia nanitatra ny tanjona ny tambajotra.
Fandaharana fandaharana natokana ho an'ny firenena nandritra ny fotoana voalohany, ny WDRB-TV dia nanjary mpikambana ao amin'ny tambajotra FOX. Avy eo, nandritra ny taona 1990, ny WDRB dia nanalavitra ny kilasy ary ny fandaharana amin'ny fandaharana sy ny fandaharana fandaharana. Ny station "vaovao" dia antsoina hoe FOX 41.
Fampandrenesana voalohany an'i Louisville
Tamin'ny taona 2007, ny WDRB no foibem-pahitalavitra voalohany tao Louisville mba hijerena televiziona Thunder Over Louisville , fampisehoana pyrotechnic isan-taona izay manamarika ny fiandohan'ny Kentucky Derby Festival .
Fihetseham-po iray no nampiseho ny fireharehana tamin'ny famaritana avo lenta ary nankasitrahan'ny rehetra tao amin'ilay faritra izay tsy nahavita nanamboatra azy io ho an'ny hetsika isan-taona. Ankehitriny, antenaina. Raha tsy afaka manatrika ianao dia jereo fotsiny izany ao amin'ny WDRB!
Fametrahana ny fitaovana ampiasainao ao Louisville sy Southern Indiana
Fomba hahitana mpitovo any Louisville
July Fourth ao Louisville
Hisy mpikatroka miondrika ao amin'ny fanjakana Kentucky
Understanding Interstates Louisville
Ireo tsy fahazoana mivezivezy any amin'ny tanànan'i Phoenix sy tanàn-dehibe
Mandeha any Budapest amin'ny volana Oktobra
Ny fiaramanidina lehibe indrindra eran-tany
Inona no mitranga ao amin'ny Village Ballpark amin'ity fahavaratra ity?
Mampiasa ATM ao Però
Igloofest 2018: Andian-tantaran'ny ririnina any Montreal
48 ora tany San Juan, Puerto Rico
Fomba roa handeha amin'ny fiaran-dalamby avy any London mankany Barcelona
Ny toeram-pizahantany tsara indrindra ho an'ny tsy mpitrandraka
Valan-drano ao Gaithersburg ao Bohrer Park